अष्ट्रेलियाका लागि भिसा कसरी लिने - तपाईलाई सबै थाहा पाउनु पर्छ Absolut यात्रा
सुसाना Godoy | | अष्ट्रेलिया
यदि तपाईंले आफ्नो मन बनाइसक्नु भएको छ र अष्ट्रेलियाको भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसो गर्नु अघि तपाईंले केहि चीजहरू जान्नुपर्दछ। सबै भन्दा माथि, प्राथमिक छ अष्ट्रेलियाका लागि भिसा कसरी पाउने। निस्सन्देह, पर्यटक भिसाका लागि आवेदन दिन धेरै जटिल हुन सक्छ, तर हाम्रो गन्तव्यको लागि। यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यो कल्पना गर्नु भन्दा सजिलो छ।
अवश्य पनि, पहिले तपाईले पनि पत्ता लगाउनु हुन्छ भिसाका प्रकारहरू जुन तपाईले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र चरणहरू अनुसरण गर्न, जब तपाईं एकको लागि रोज्नु भएको छ। सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको सबै डोरी बाँधेर हाम्रो गन्तव्यमा जानु अघि यसलाई सम्भव भएसम्म रमाइलो लिन। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि अष्ट्रेलियाको भिसा कसरी लिने?
1 अष्ट्रेलियाका लागि भिसाका प्रकारहरू
1.1 eVisitor (उपवर्ग 651 XNUMX१)
1.2 ETA भिसा (subclass 601)
1.3 आगन्तुक भिसा (सबक्लास 600००)
1.4 वर्किंग हलिडे भिसा (सबक्लास 462 XNUMX२)
2 अष्ट्रेलियाका लागि भिसा कसरी पाउने
3 के अष्ट्रेलियाबाट भिसा नवीकरण गर्न सकिन्छ?
4 के मैले मेरो भिसा प्रिन्ट गर्नु पर्छ?
अष्ट्रेलियाका लागि भिसाका प्रकारहरू
तपाईलाई चाहिने भिसाको प्रकार छनौट गर्दा तपाईले यसको बारेमा सोच्नु पर्छ तपाईंको यात्रा को उद्देश्य। यसका अतिरिक्त हामीले त्यहाँ बस्नुहुने समयको पनि विचार गर्नुपर्छ। एक तरीकाले वा अर्को तरीकाले सम्झनुहोस्, तपाईंसँग तपाईंको पासपोर्ट क्रमबद्ध हुनुपर्दछ। यी डाटाको आधारमा, तब हामी एक वा अर्को प्रकारको भिसा छान्ने छौं।
eVisitor (उपवर्ग 651 XNUMX१)
यस्तो अवस्थामा सायद हामी भिसाको बारेमा कुरा गर्न सक्दैनौं। यो यूरोपियन युनियनका नागरिकहरूको लागि एक प्रकारको प्रमाणपत्र वा प्राधिकरण हो। यात्राको उद्देश्य पर्यटन वा काम सम्बन्धी हो, तर कहिले पनि केही सेवाहरू गर्नु हुँदैन जुन पारिश्रमिक हुनेछ। अधिकतम रहन तीन महिना र हुनेछ तपाईं यसलाई अनलाइन प्रबन्धन गर्न सक्नुहुनेछ निःशुल्क।
ETA भिसा (subclass 601)
El ETA भिसा (इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण) सबैभन्दा सामान्य कुरा हो। जो पर्यटन गर्न जाँदैछन् को लागी परिपूर्ण हुनुको साथै यसले तपाईलाई अध्ययन गर्न र केहि व्यापार गर्न पनि अनुमति दिन्छ। तर यो याद राख्नुहोस् कि तपाइँसँग अधिकतम लगातार तीन महिना अष्ट्रेलियामा रहनुभएको छ। यद्यपि यो सत्य हो कि यो १२ महिनाको लागि मान्य छ। यद्यपि यो नि: शुल्क पनि हो, हाम्रो लागि यति धेरै छैन। कुनै पनि भन्दा बढि किनकि हामी यसलाई अष्ट्रेलियाली दूतावास वेबसाइट मार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं। यस अवस्थामा, यो एजेन्सी मार्फत गरिने छ, तर अनलाइन पनि। यसको मूल्य e० युरो छ।
आगन्तुक भिसा (सबक्लास 600००)
यस अवस्थामा, दुबै पर्यटन र व्यापार हाम्रो भिसा को मुख्य विकल्प हुनेछ। यसले तपाईंलाई अष्ट्रेलियामा लामो समय सम्म रहन अनुमति दिन्छ किनकि तपाईं,, and र १२ महिना बीचमा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि, यस अवस्थामा र तपाईंको बसाईको समयको आधारमा यो अधिक महँगो हुनेछ। त्यसकारण, यो भन्न सकिन्छ कि तिनीहरूको मूल्यहरू $ १ .० देखि लगभग $ १००० सम्म सुरु हुन्छ।
वर्किंग हलिडे भिसा (सबक्लास 462 XNUMX२)
यस प्रकारको भिसाका सीमित स्थानहरू छन्। यो सरकारले मात्र उनीहरूलाई अनुदान दिने छ काम वा अध्ययन को माग मा आधारित छ। यो केवल 30० बर्षको उमेरसम्म मान्य हुनेछ र यसको मूल्य $ 400 को आसपास छ। यद्यपि यो सत्य हो कि यसलाई धन्यवाद, तपाईं छ महिना भन्दा बढी काम गर्न वा चार भन्दा बढीको लागि अध्ययन गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। फेरि, समयहरू धेरै तंग छन्।
अब तपाईंलाई थाहा छ अष्ट्रेलिया जाने भिसाका प्रकारहरू। सबै भन्दा साधारण ETA वा eVisitor हो। पछिल्लोलाई अनुरोध गर्ने उत्तम तरिका मध्ये एक खाता प्रविष्ट गरेर र सिर्जना गरेर हो ImmiAcount त्यो बारेमा छ अष्ट्रेलिया सरकारको वेबसाइट। हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं कि ETA भिसा यस पृष्ठ मार्फत गर्न सकिदैन। सँधै एजेन्सीहरू द्वारा र त्यहाँ धेरै छन् जुन ईन्टरनेटमा सर्किन्छन्। हामी "राष्ट्रिय भिसा" वा "भिसाडोस.अर्ज" पार गर्दै आएका छौं।
तपाईंले यी व्यक्तिगत वेबसाइटहरूमा देखा पर्ने फारमहरूमा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा कभर गर्नुपर्नेछ। अवश्य पनि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो हो डाटा देखाइनु पर्छ जुन यो राहदानीमा देखिन्छ। यस तरिकाले, तपाईं विभिन्न भ्रमहरूबाट टाढा रहनुहुनेछ जसले केही समस्या निम्त्याउन सक्छ। एक पटक फारामहरूको सबै चरणहरू सकियो, भुक्तान पनि इन्टरनेट मार्फत गरिनेछ। अब त्यहाँ केवल अनुमोदन नै छ जुन प्रायः २ 24 घण्टामा गरिन्छ।
के अष्ट्रेलियाबाट भिसा नवीकरण गर्न सकिन्छ?
यो भन्नु पर्दछ कि यदि तपाइँ तपाइँको भिसामा दुई पटक नवीकरण गर्नुहुन्छ, लगातार, तब तपाइँलाई $ 700 को बारेमा शुल्क लाग्नेछ, थप भिसाको मूल्य। यसबाट सुरू गर्दै, यो भन्नु पर्दछ कि भिसा सधै नवीकरण गर्न सकिदैन। यदि तपाईंसँग ETA भिसा (सबक्लास 601०१) छ भने, तपाईंले अर्को भिसाका लागि आवेदन दिन पर्छ। उदाहरण को लागी, तपाई यो पर्यटक भिसा (subclass 600) को साथ गर्न सक्नुहुन्छ। जबकि यो eVisitor (subclass 651) को साथ गर्न सकिदैन।
के मैले मेरो भिसा प्रिन्ट गर्नु पर्छ?
यद्यपि भिसा इलेक्ट्रोनिक रुपमा जारी गरिन्छ, यो प्रिन्ट गर्न चोट लाग्दैन। कुनै पनि भन्दा बढि केसहरूमा तिनीहरूलाई कुनै पनि समयमा यसको आवश्यक पर्दछ। कुनै श doubt्का बिना, पहिले नै राहदानीको साथ, अध्यागमनमा तपाइँको सबै अद्यावधिक जानकारी हुनेछ। तर धेरै व्यक्ति विश्वास गर्छन् कि सुरक्षा को लागी, यो तपाइँ संग प्रिन्ट मा संगै राख्न को लागी राम्रो हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यस बिन्दुमा हामी आफैंलाई आफ्नो आफ्नै रायहरु बाट टाढा जान दिनेछौं।
हामीले हेर्‍यौं, हरेक भिसा बढी वा कम विशिष्ट कुराको लागि हो। यस कारणका लागि, यो भन्नु पर्दछ कि eVisitor को रूपमा भिसासँग काम गर्न यो अवैध मानिनेछ। तसर्थ, त्यहाँ धेरै प्रकारका विकल्पहरू छन्, ताकि प्रत्येक व्यक्तिले एउटालाई छनौट गर्दछ जुन तिनीहरूलाई उत्तम उत्तम सूट गर्दछ। अर्कोतर्फ, अष्ट्रेलियाको यात्रा स्वास्थ्य बीमा बिना गर्न सकिदैन। अब यो अष्ट्रेलियाको भिसा कसरी लिने भन्ने तथ्यको अंश हो, तर यो धेरै आवश्यक छ। यस ठाउँमा सरसफाइ एकदम महँगो छ। त्यसो भए यसका बारे सचेत रहनु सधैं उत्तम हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अष्ट्रेलियाका लागि भिसा कसरी पाउने
बार्सिलोना आकाशबाट एक स्टार समर्पित गर्नुहोस्
कॉर्डोबा होटेलहरु नयाँ साल को पूर्व संध्या तयार गर्दछ